I-Manchester City enganqandeki inqoba imidlalo eyi-17 ngokulandelana | Scrolla Izindaba
I-Manchester City enganqandeki inqoba imidlalo eyi-17 ngokulandelana
Ngenkathi abaholi abanganqandeki be-English Premier League i-Manchester City behlula i-Everton ngamagoli amathathu kwelilodwa ngoLwesithathu, bakushaye indiva ukunqoba kwabo okwe-17 kulandelana kuyo yonke imincintiswano nakowe-12 ku-Premier League.
Futhi bayiqembu lokuqala emlandweni we-top flight ukunqoba imidlalo yokuvula eyi-10 ngonyaka wekhalenda. Abakaze behlulwe kanye emidlalweni yabo eyi-16 ye-Premier League.
Ngokuhola ngamaphuzu ayi-10 i-City ilindeleke ukuthi ibe ngompetha base-England bowezi-2020/21.
Owayengumdlali we-Liverpool ne-Manchester United, uMichael Owen uthe i-City ikhuphuke ngesikhathi esifanele ukunqoba ama-quadruple.
“Basengayinqoba i-Premier League. Bakumdlalo wamanqamu we-Carabao League Cup, baseseNdebeni ye-FA futhi ngubani ozothatha i-Champions League kubo? Banganqoba yomine kule sizini,” uyasho.
Owayengumdlali ovikelayo we-Arsenal u-Lee Dixon uvumile ukuthi umbango wesicoco usuphelile.
“I-City ayideli futhi njengoba uSergio Aguero ebuya baqinise kakhulu phambili futhi ngokuzivikela banamandla kakhulu,” kusho uDixon.
Umqeqeshi we-Everton uCarlo Ancelotti uthe kunzima kakhulu ukucabanga nganoma yiliphi elinye iqembu elinganqoba iligi.
“Okwamanje basesimweni esihle futhi banekhwalithi emnandi. Banenkolelo futhi banamandla,” kusho u-Ancelotti.
Komunye umdlalo we-Premier League odlalwe ngoLwesithathu, i-Burnley ibanjelwe ekhaya yi-Fulham emdlalweni ophele ngegoli elilodwa kwelilodwa.